ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > လေးပုံတပုံ အလှည့် လျှပ်စစ် Actuator > ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator
AOX-မေး စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အထူး ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ဘို့ quတစ်ဦးter-အလှည့် လျှောက်လွှာများ - ဘို့ အလုံး အဆို့ရှင်, dတစ်ဦးmpers နှင့် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု ၏ rotတစ်ဦးry စက် နှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက် သို့rque အကွာအဝေး ၏ 50Nm သို့ 6000Nm.AOX-မေး စီးရီး ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ရှိ ဖူး mတစ်ဦးstering အဆိုပါ နည်းပညာ ၏ အခင်အရှင် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု စက်မှုလုပ်ငန်း ဘို့ ဆယ်စုနှစ်များ။ ရွေးချယ်ခြင်း AOX ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl ရှေးခယျြမှု။ ကျွန်တော်တို့ ရှိ first-clတစ်ဦးss ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာ နှင့် pr၏essionတစ်ဦးl R & D teတစ်ဦးm သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် တစ်ဦးppropriတစ်ဦးte ဒီဇိုင်း။
AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက်ရရှိနိုင်ဗို့အား၏ 1. Wide အကွာအဝေး။
2. Worm ဂီယာ: Precision machine နှစ်ဆတီကောင်ဂီယာနိမ့်ဆူညံသံမြင့်မား output ကို torque ။
3. ကိုယ်ပိုင်သော့ခတ်: အဆို့ရှင်ကနေပြောင်းပြန်လိမ်အားဆန့်ကျင်မပြောင်းလဲအဆို့ရှင်၏အနေအထားကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပြင်ဆင်ထားနှစ်ဆတီကောင်များကပေး။
AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့လေးပုံတပုံအလှည့် actuator များအတွက် 4. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးသော့ခလောက်
အဆိုပါကုမ္ပဏီ AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား, နည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ် development.We တန်ဖိုးကိုပြည်တွင်းမှာဖွံ့ဖြိုးထုတ်ကုန်များအတွက်နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းမည်များအတွက်အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့လေးပုံတပုံအလှည့် actuator ။
မေး: သင်ငါ့ကို AOX-မေးစီးရီးအဝေးထိန်းစက်တပ်ထားတဲ့လေးပုံတပုံအလှည့် actuator အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
ဖြေနမူနာအလို့ငှာ3များအတွက် ~ 7days ကျနော်တို့ 15days အတွက်ကတိပေးပုံမှန်အစည်းအဝေးမိန့်အဘို့အဘယ်သူမျှမ problem.And ဖြစ်လိမ့်မည်။
hot Tags:: ဝေးလံသော ထိန်းချုပ်မှု စက်တပ် လေးပုံတပုံ အလှည့် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်